Aung Win Hein (Noble): 12/15/11
မြတ်စွာဘုရားက “ မာ အနုဿဝေန ”
မှန်ပြီ သို့မဟုတ် မှားပြီ၊
တစ်ခုခုကို မှန်တယ် သို့မဟုတ် မှားတယ်လို့
တွေနဲ့ ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ မှန်တယ်လို့
"မာ ပိဋက သမ္ပဒါဒေန"
"မာ သမကောနော ဂရူတိ"
လက်ခံရမှာပဲလို့ ဆိုပြီးမှန်တယ်လို့ လက်မခံပါနဲ့။
There is no easy and simple way out.
လူရဲ့dignity & worth
2011 World’s Most Powerful (ကမ္ဘာ့သြဇာအာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်-၁၅-ဦး)
1. Barack Obama (၅၀-နှစ်)-အမေရိကန်သမ္မတ၊
2. Vladimir Putin (၅၉-နှစ်)-ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်၊
3. Hu Jintao (၆၈-နှစ်)-တရုပ်သမ္မတ၊
4. Angela Merkel(၅၇-နှစ်)-ဂျာမဏီဝန်ကြီးချုပ်၊
5. Bill Gates (၅၆-နှစ်)-Microsoft ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီဥက္ကဌ
6. Abdullah bin Abdul Aziz al Saud (၈၇-နှစ်)-ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားဘုရင်၊
7. Pope Benedict XVI (၈၄-နှစ်)-ရိုမန်ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်ကြီး၊
8. Ben Bernanke (၅၇-နှစ်)-အမေရိကပြည်ထောင်စုဘဏ်ဥက္ကဌ၊
9. Mark Zuckerberg (၂၇-နှစ်)-facebook လူမှုရေးကွန်ယက်တည်ထောင်သူ၊
10. David Cameron ( ၄၅-နှစ်)-ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်၊
11. Sonia Gandhi ( ၆၄-နှစ်)-အိန္ဒိယကွန်ဂရက်ပါတီဥက္ကဌ၊
12. Mario Draghi ( ၆၄-နှစ်)-ဥရောပဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌ၊
13. Nicolas Sarkozy ( ၅၆-နှစ်)-ပြင်သစ်သမ္မတ၊
14. Wen Jiabao (၆၉-နှစ်)-တရုပ်ဝန်ကြီးချုပ်၊
15. Zhou Xiaochuan ( ၆၃-နှစ်)-တရုပ်ပြည်သူ့ဘဏ်ဥက္ကဌ။
အိုဘားမားဟာ လူမည်း-လူဖြူ ကပြားအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်တယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက လူမည်းတွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကျွန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
အတိတ်က ဘာတွေဘဲဖြစ်ခဲ့၊ဖြစ်ခဲ့၊ မှန်ကန်စွာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်